Nkwado ire ahịa: Imechi oghere dị n’etiti ire ahịa na ịzụ ahịa
Imechi oghere dị n’etiti ire ahịa na ịzụ ahịa
Monday, March 4, 2013 Tuzdee, Machị 5, 2013 Jenn Lisak Golding
Isiokwu nke na-agbanwe okpukpu ire dị na ụlọ ọrụ ọ bụla. Akụkụ dị ukwuu nke mgbanwe ahụ bụ otú anyị si ele ahịa anya, na nke kachasị mkpa, otu esi atule usoro ahịa na ire ahịa karịa mgbe ọ bụla. Tù dị iche iche kwesịrị ịtụle otú nzukọ ha si abịakwute ahịa na-agbanwe agbanwe ka ha wee ghara ida ohere ọ bụla. Ndi ntughari gi si na ahia rue ahia? You na-enye ndị ọzọ ihe ọmụma zuru ezu? Na-elekwasị anya atụmanya ziri ezi? Ndị a bụ ajụjụ ị kwesịrị ị na-ajụ mgbe niile.
Nkwado ire ahịa, n’uche nke m, na-eweta ndị otu abụọ (ahịa na ahịa) ọnụ. Ọ na - emepụta mmekọrịta mmekọrịta, ebe ọganiihu nke otu dabere na nke ọzọ na nke ọzọ. N'ihi nke a, ìgwè ndị a na-agbakọ ọnụ ma na -emepụta usoro ọrụ ga-eme ka inye aka were jide ndị ahịa.
Ndị ahịa anyị na TinderBox arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche dị iche iche site na ịnye ndị ahịa njikwa nkwuputa ire ahia. Nkwado ahia bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ire ahịa, mana ha makwaara na mmekọrịta tupu onye na-ere ahịa abịarute na usoro a chọrọ ịtọ ntọala maka mmekọrịta ahụ na-aga n'ihu. Ige ndị ahịa ntị na ịnakọta data sitere na ahịa ga - enyere gị aka ọ bụghị naanị ịbanye na ntinye a, mana ọ ga - enyere gị aka ịmepụta atụmatụ mgbasa ozi bara ụba nke na - arịọ maka mkpa na mkpa nke atụmanya ahụ.
Anyị na ndị otu rụkọrọ ọrụ na TinderBox iji mee nyocha nyocha gbara ahịa na etu esi apụta ihe na-agbanwe egwuregwu ahụ. You na-enweta ụfọdụ n'ime mgbu ndị a? Kedu mgbanwe ndị ị na-eme n'ime nzukọ gị iji mezie ahịa na ahịa?
Tags: nkwurịta okwumarketingNkwado ire ahịaAmụma Ahịa
Etu aga-esi dee ọdịnaya n’ebe ndị ọbịa bịara mata uru ị bara